Flash Player u iPhone, iPad, iPod Touch
Adobe Flash Player u iPhone / iPad / iPod Touch
Doonayay inuu ka ciyaaro Flash videos ama kulan aad iPhone ama iPad? Nasiib darro, aaladaha Apple ma taageeri Flash mana jirto wax Adobe Flash player u iPad iyo iPhone. Sababaha Apple furid ciyaaryahan Flash ee iPhone / iPad hoos ku qoran yihiin.
Flash u baahan tahay xusuusta aad u badan.
Waxaa la cunaa nolosha batteriga.
Waxay iska dhigi kara khilaafaadka la codsiyada kale.
Adobe ayaa joojiyay horumarinta Flash talogalay qalabyada telefoonada gacanta.
Sidoo kale Adobe ayaa joojiyay horumarinta Flash talogalay qalabyada telefoonada gacanta. Ha welwelin! Waxaad isticmaali kartaa barnaamijyadooda hoose si aad u daawato deegaanka ama online Flash ku salaysan websites, ciyaaraha iyo videos.
Play Web Flash on Device macruufka
Play Local Flash on Device macruufka
Si aad u ciyaaraan web Flash videos ama kulan, waxaad isticmaali kartaa a ciyaaryahan browser Flash u iPhone ama iPad si uu u daawado Flash content on qalabka macruufka aad, ama aad kara dejisan iyo badalo Flash u macruufka qalabka socon videos.
Habka 1: Play Flash on iPhone / iPad la 7 Top ee Flash Player daalacashaduna
Habka 2: Download & Beddelaan Web Flash in macruufka socon Video
Suported Flash: Adobe Flash (FLV, F4V, Jabbuuti)
Download Wixii iPhone / iPad
Photon Browser waa ka duwan Safari xoogga iyo xirfadda. Waxaa loo qorsheeyay in ay bixiyaan waayo-aragnimo fiican loo maqli karo sida Flash ah Player u iPhone, iPad iyo iPod taabto. Waxaad dareemi kartaa si xor ah u dhirtuba websites Flash on qalabka macruufka aad. Marka la isticmaalayo Photon Browser, fadlan xasuuso inaad riix "badhanka Bolt Hillaac" inay soo galaan hab Flash dhirta ah, ama aad u noqon doonaa weli in hab hooyo u websites caadiga ah. Si loo xaliyo Marlon video ama talaagada, aad qabsato karaa goobaha bandwidth si aad u hesho waayo-aragnimo wanaagsan Flash. The hab network ugu wanaagsan ee uu noqon doono WiFi u hab Flash ah.
Download Wixii iPhone Download Wixii iPad
Skyfire waa browser web kale Flash video-karti u iPhone, iPad iyo iPod Touch. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad daawato tiro balaadhan oo ah Flash videos online sida news live, dhacdooyinka iyo TV ciyaaraha muujinaysaa ku saabsan qalabka macruufka. The kordhin browser Skyfire Horizon kuu ogolaanaysaa inaad Customize ka badan 15 ka mid ah qalabka browser jecel sida warbaahinta bulshada, newsfeeds ama shopping. Mid ka mid ah wax muhiim ah in aad u baahan tahay in la ogaado waa in Skyfire waxaa loogu talagalay daawashada Flash video. Flash animation, barnaamijyadooda Flash ku salaysan, kulan Facebook & Zynga, iwm waa laga reebay.
iSwifer kuu ogolaanaysaa inaad daawato aad jeceshahay Flash videos, websites Flash, oo ugu muhiimsan, ciyaaro ugu kulul Flash MMOs & kulan web bulshada ee iPad ah, isla. Waa lacag la'aan ah muddo 10 daqiiqo ah maalin kasta muddo hal todobaad ah. Ka dib markii aad maxkamadda waa, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso $ 7.99 in ay sii wadaan isticmaalkiisa. iSwifter u baahan tahay xidhiidh Wi-Fi oo kaliya shaqeyn karaan ciyaaryahan Adobe Flash ah ee iPad.
Download Wixii iPad
CloudBrowse users siinayaa taageerada Flash on qalabka macruufka. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku raaxaysato Flash content sida Flash Adobe ah Player u iPhone iyo iPad by hoorto browser desktop-ka si aad iPhone iyo iPad. CloudBrowse shaqeeyaa si degdeg ah Hillaaca, laakiin loo maqli Flash waa xoogaa gaabis ah oo mararka qaarkood video iyo maqal ah oo aan la beehsa karo. CloudBrowser aan ay taageerayaan Hulu.
Browse2go waa browser kale oo weyn web bixiya muuqan Flash waayo-aragnimo loo maqli karo. Waxaa Eebay bogga internetka codsaday daruurta ku si loo yareeyo kharashka xogta, siinta aad u jaban waayo-aragnimo web fankooda dhakhso iyo. Iyadoo Browse2go, waxaad daawan kartaa malaayiin videos Flash ku salaysan, ciyaaraha iyo codsiyada.
7. VirtualBrowser u Firefox
The Virtual-Browser u Firefox® App waxay keentaa xoogga 'version desktop' buuxa oo ka mid ah browser Mozilla® Firefox®web in aad iPad iyo iPhone. Iyadoo qalab, waxaad isticmaali kartaa websites Flash, isticmaali barnaamijyadooda Flash ku salaysan, ciyaaraha iyo videos. Sidoo kale waxaad ku dhowaad codsi kasta oo Java sida Runescape, PartyPoker, Scottrade, iwm ordi karaan in aad weliba, isticmaali kartaa oo dhan Customization iyo qaababka isku dhafan ku bixiyeen in Firefox-socodka, koronto-tago, Toolbars iyo Extensions. Version ayaa Premium bixiyaan qaababka sida hab Video, VPN xiriir ecrypted, (waayo, ilaalinta WiFi dadweynaha, iyo in ay garab web filter / firewalls), u hagaagsan iyo Java.
Habka 2: Download & Beddelaan Web Flash Video
Habkan, waxaad u baahan tahay downloader video inaad kala soo baxdo oo aanay online Flash videos qalabka macruufka aad ah. Halkan waxa ku jira 2 qalab awood badan, Video Converter Ultimate iyo YouTube Downloader, daynin aad ku raaxaysato faa'iidooyinka Flash ah Player u iPhone / iPad. Labada iyaga ka mid ah waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka badan 100 goobood oo video qaybsiga, oo ay ku jiraan YouTube, buug Face, Dailymotion, Metacafe, iyo in ka badan kala soo bixi videos.
Aniga ahaan, waxaan soo xuli doona Video Converter Ultimate for Mac ( Video Converter Ultimate for Windows ) ee shaqada awood iyo xawaaraha shaqada ugu dhaqsiyaha badan. Haddii aad qabto doorasho badan, kaliya nala wadaagto by tagay a comment on maqaalka. Halkan waa tutorial kooban oo ku saabsan sida ay u daawadaan Flash on iPhone ama iPad la qalab this . Tallaabada 1. Ka dib software ah, riix "Download" tab on menu ugu sareeya, guji "URL paste" oo nuqul ka video web link Flash ah, ka dibna aad video si toos ah lagala soo bixi doonaa xawaare super degdeg ah. Tallaabada 2. Click "Beddelaan" tab, dajiyaan aad video bixi u galay, ay doortaan qalabka Apple sida qaabka wax soo saarka ee ay leeg- tahay wax soo saarka, iyo ugu dambayntii guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan si loogu badalo. Tallaabada 3. Transfer aad badaley Flash video inay iPhone ama iPad u loo maqli karo.
Si aad u ciyaaro Flash video deegaanka, waxaad isticmaali kartaa a Flash video Converter si loogu badalo Flash in Apple oo ay taageerayaan qaab on your computer, ka dibna lagu wareejiyo video ee la gediyay in aad qalab macruufka ah. Si kale waa in aad karaa rakibi ciyaartoyda Flash free aad iPhone ama iPad si uu u daawado Flash content (FLV kaliya la heli karo).
Habka 1: Ku rakib Flash Player on iPhone / iPad
Habka 2: Beddelaan Flash in qaab Apple ay taageerayaan
Habka 1: Ku rakib Flash Player u iPhone / iPad
Waxaad u ciyaari kartaa Flash video maxalliga ah qalabka macruufka la ciyaartoyda free Flash hoos ku qoran. Flash taageerayaan: FLV
VLC waa Adobe Flash player fudud, si degdeg ah oo awood leh iPhone / iPad. Waa video ciyaaryahanka ugu caansan dad badan oo ka mid ah. Waxaad ku ordi karo oo dhan macruufka ama qalabka Android, iyo xataa Windows, Linux, iyo Mac OS X. Waxa ay taageertaa codecs kala duwan sida DivX ama H.264, iyo qaabab kala duwan sida video FLV, avi, mkv, mp4, wmv, iyo in ka badan .
Download Wixii macruufka
RockPlayer2 waxaa loo isticmaali karaa inuu u ciyaaro Flash video MKV, AVI, RMVB, FLV oo badan oo ku saabsan qalabka macruufka. Just wareejin FLV video aad iPhone ama iPad ka dibna ciyaaro aad video muuqan. RockShare The kuu ogolaanayaa inaad la wadaagto videos u dhexeeya qalabka socon badan WiFi.
3. Wondershare ciyaaryahan
Tani ciyaaryahan Adobe Flash ayaa diyaar u ah iPhone, iPad iyo iPod taabto. Waxay kaa caawinaysaa in aad ka heli ugu kulul filimada, show TV la feature raadinta internetka. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa "Water Later" function ku raaxaysan kaydin doono videos offline ee wax kharash dheeraad ah. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka ciyaaro oo dhan Media & xitaa DVD files aan soo degsado codec kasta.
Halkan waxa ku jira 3 Flash free video converters. Waxaad isticmaali kartaa oo dhan oo iyaga ka si loogu badalo Flash in Apple qaab ay taageerayaan.
Waxaad isticmaali kartaa MPEG Streamclip si loogu badalo Flash video in QuickTime, AVI, DV, iyo MPEG-4 files, iyo in ka badan. Sidoo kale tani Flash Converter oo lacag la'aan ah ayaa presets badan Apple, inta badan ka sahlan marka aad video diinta. Waxaa intaa dheer, taasi Flash video Converter taageertaa Iyada oo videos by jarida, koobiyeynta, dhajinta, iyo falinjeeerka hor diinta.
Converter 2. Leawo Free FLV
Leawo waa dhammaystiran oo lacag la'aan ah FLV video Converter. Waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo FLV si iPhone, iPad, iPod, PSP, iwm la presets filaayo. Waxaa kaloo ka mid ah video downloader lacag la'aan ah, samaynta aad files FLV ka goobaha video qaybsiga badan sida YouTube, Google Video, MySpace, Dailymotion, Metacaft, oo dheeraad ah u hesho.
Tani Converter Flash awood u diinta ku dhawaad ​​kasta video caadi ah (Flash video ka mid ah). Waxaa u qabata at 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta iyo badasha Flash video tayo waayi maayo. Ka sokow diinta video, sidoo kale waxa aad isticmaali karto si aad xaalkaa video download iyo YouTube videos ka goobo badan.
Muuqaalka: Flash dhintay on iDevices?
Steve Jobs ayaa ka hadlay sida ay ka fikirayay ayaa sababta Apple ma taageeri lahaa Adobe Flash . Sidoo kale Adobe dhawaaqay horumarka lahayn ee Flash talogalay qalabyada telefoonada gacanta.
Iyada oo taageero HTML 5, goobaha badan ayaa la dayacay Flash. Waxaan u maleynayaa in HTML 5 noqon doonaa hab baxay iyo bedelo Flash. Waxa ay noqon doontaa warbaahinta caadiga ah ee mustaqbalka. Laakiin waa wado dheer si ay u tagaan, waayo, horumarinta u baahan tahay si ay u eegaan taageerada kala duwan browser ee qaybaha kala duwan ee caadiga ah iyo shaqeynta kala dhexeeya HTML5 iyo Flash.
> Resource > Beddelaan > Flash Player u iPhone / iPad / iPod Touch